crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Wax kabaro Digaagta | HimiloNetwork
Wax kabaro Digaagta
Posted by: Zakariya in Deegaankeenna December 15, 2016	0 2,029 Views
Muqdisho (Himilonews) – Shinbiro inta badan dab-joog ah oo aan dhab u duulin; oo midabo kala duwan leh; diyaad, dooro; ama shinbirluki. Labkiisa waxaa la yiraahdaa Diiq; tan dhedigta ahna waxaa lagu magacaabaa Digaagad.
Yaryarka digaaga waxaa la yiraahdaa Jiijiil. Midda aan wali curan waxaa la yiraahdaa Boojaal. Dul-fariisadka shinbiruhu ay ugxantooda ku dul-fariistaan ooy u kululeeyaan taniyo inta ay ka dilaacayaan waxaa la yiraahdaa Cuq. Xilli huuriska ukunta wuxuu u dhaxeeya 20-21 maalmood.
Abuurka layaabka leh ee Digaagtu Ilaahay ku khalqay waxaa kamid ah iyada oo kala sooci karta wajiyada boqol qofood ama xayawaan oo kala duwan, taas oo ah inay leeyihiin maskax wayn. Waxay u riyoodaa sida Aadmiga maray hurdaan. Wayna isku baroor-diiqaan. Dhawaaq kasta oo ay dhawaaqaan wuxuu u leeyahay ama u taagan yahay micno iyo ujeeddo gaar ah.
Waa shinbirta ugu tirada badan ee ifka ku nool oo ka badan 25 bilyan. Dhedigtu waxay sanadkiiba ku dul-fariisan kataa 300 oo ugxamo ah.
Cimri-dhererkoodu wuxuu u dhaxeeyaa 5-10 sanadood. Tii ugu cimri-dheereyd waxaa istaagay wadnaha iyada oo jirta 16-sanadood taariikhda lahayo.
Hal-ku-dhigyadii laga yiri Doorada waxaa kamid ah;
Dooro saxaro waa cuntaa, af-tirashayse is dheer tahay.
Dooro qoor-qabad biyo kuma cabto.
Dooradaada iga cesho, dagaal bilowgiisa waaye.
Previous: Wax kabaro Eyga
Next: Saameynta daaciga la isku maan-dhaafay – Dr. Zaki Naik
Marka uu Gerigu boodo Farowga!
Wax kabaro Eyga
Wax kabaro Jiirka ama Doolliga
La kulan – Muslimkii – si uu u xejiyo – lug uga soo tagay London kuna yimid Makka.
Sucuudiga oo sannadkan qorsheynaya in Xajku noqdo mid deegaan-la-jaal ah ‘eco-friendly’.
Laacibka Nigeria oo deeq lacageed siinaya dadka gaaraya 5,000.
Sucuudiga oo markii ugu horreysay xujeyda siin doona adeeg caafimaad.
Daawo – Tartanka lagu dhex legdamo baabuurta.
La kulan: Hooyada 73 jirta ee baranaysa sida loo wado Baaskiilka.
La kulan – Samafalaha u istaagay Samata-bixinta Eeyaha Dayacan iyo Kuwa Dhaawacan!
Dhibaatada lagu hayo Muslimiinta Rohingya.
Cudurka Kaduudiyaha oo soo laba-kacleeyey
Dhageyso: Warbixin la xiriirta dhibaatada caafimaad ee ka dhalata biya-fariisiga xilli-roobaadyada.